Filename kordhiyo: .AVI
Category: Warbaahinta Container Qaabka
Xaqiiqada Fun ku saabsan AVI
AVI ma bixiso hab caadi ah in encode macluumaad muuqa, oo sababtay in ciyaartoyda aan dooran kartaa saamiga dhinaca midig si toos ah (inkastoo waxaa laga yaabaa in ay suurtogal tahay in ay sidaa sameeyaan gacanta).
Audio Video Interleave - oo loo yaqaan oo dunida sidii AVI oo dhan - waxaa sameeyay Microsoft dib ugu soo laabtay 1992. AVI files waxaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo video iyo warbixin maqal ah oo ku saabsan adag disk drive computer ah. Ayadoo la mideeyo codka iyo faahfaahinta muuqaal galay file hal halkii ay kuwa gaar ah, file AVI ah ka dhigaysa loo maqli fudud, oo isku mar, iyadoo gaabiyo yar oo dhagan, natiijada dhamaadka watchable. Files AVI tahay mid aad loo jecel yahay xirfadlayaasha (iyo amateurs) samaynta videos iyo iyaga sixiddiisa in ay tayo leh ugu sarreeya weli si fudud nooc file sharable iyo alaabada ay suurtagal tahay. Tan iyo tiro ka mid ah codecs kala duwan (qalabkaas oo u qaniinaa video files) lihin files AVI, waxaa suurto gal ah in aad tijaabiso nooca file ilaa ugu wanaagsan ee ratio size tayada la helo. Si ka duwan noocyada file qaar ka mid ah in laga badiyo oo tayo leh marka ay ciriiri, files AVI ilaaliyaan awoodooda tayo leh isticmaalka saxda ah ee codecs.
Top 3 AVI Players u Mac (Yosemite mid)
AVI Player u iPhone: Sida loo Play AVI
Ma ciyaari karo AVI Files on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 xalka?
AVI Free Player: Play AVI Faylal ay ku Windows8
Beddelaan AVI in qaab kasta oo
Beddelaan AVI in MP4 aan Loss Quality
Sida loo Beddelaan AVI in iPad
Sida loo Beddelaan AVI u 5S New iPhone
Sida loo Beddelaan AVI in DVD ee Mac / Windows
Sida loo Beddelaan AVI in MPEG ee Mac / Windows
Sida loo badalo AVI ama From kale Video
Sida loo Beddelaan AVI si fudud loo wmv
Sida loo Beddelaan AVI in iDVD ama DVD ee Mac
Sida loo badalo AVI in MOV (Quicktime)
Sida loo Beddelaan AVI in FLV ee Mac / Win
Beddelaan qaab kasta oo ay u AVI
Sida loo badalo MP4 in AVI on PC iyo Mac
10 Methods Free si loogu badalo MOV in AVI
Sida loo Beddelaan Video_TS in AVI ee Mac / Win
Sida loo badalo YouTube in AVI
Sida loo Beddelaan MOV in AVI ee Mac / Windows
Sida loo badalo FLV in AVI
Sida loo Beddelaan wmv in AVI
Xaqiiqooyinka la jaan qaada files AVI
Files AVI la ordi karaan hababka kala duwan oo kala duwan, kuwaas oo ku darayaa in ay dabacsanaan iyo caan. Haddii aad isticmaasho Windows, Mac ah, Linux, ama Unix, waxaad awoodi doontaa inaad u ciyaaro, la qabsadaan, oo wuxuu ku raaxaysan files AVI. Waxaa xitaa waxaa loo isticmaali karaa on ugu daalacashada internetka iyo, la Converter lala soo bixi karo, files AVI la ordi karaan on telefoonada smart, MP3 players, iyo xataa kaalimada kulan.
Barnaamijka (s) in la furo files .AVI
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac
Goobaha Online in AVI Faylal ay la jaan
Qalabka in Open AVI Files
• Madaxweyne Siilaanyo Oo mid ka mid
• Wixii la doonayay